Qaraxyadii ka dhacay Lebanon Khasaaraha oo sii kordhaya iyo dowladda oo dalbatay gurmad caalami ah | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Qaraxyadii ka dhacay Lebanon Khasaaraha oo sii kordhaya iyo dowladda oo dalbatay gurmad caalami ah
Waxaa isi-soo taraya khasaaraha ka dhashay qaraxyo waa weyn oo gelinkii danbe shaley gil-gilay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lebanon, kuwaas oo ka dhacay gudaha bakhaarro ku yaalla meel u dhaw dekedda weyn ee Beirut.
Ra’iisul wasaaraha dalka Lebanon Xasan Diab oo dadka la hadlay ayaa sheegay in dowladdu ay xaqiijisay geerida 30 qofood iyo dhaawayada 300 oo kale, isla markaana uu weli socdo gurmadka dadka looga soo saarayo dhismayaasha burburay hoos tooda.
Sidoo kale R/Wasaaraha ayaa dadka reer Lebanon ka dalbaday inay isu gurmadaan, si loo badbaadiyo dadka dhaawacmay iyo kuwa weli burburka ku hoos jira.
Illaa hadda waxaan si rasmi ah loo ogeyn waxa qarxay, hasa yeeshee warar hor dhac ah ayaa sheegaya in laba bakhaar oo ku yaallay gudaha dekedda ay ku keydsanaayeen kiimikooyin u nugul inay qarxaan.
Hoos ka daawo hadal jeedintii ra’iisul wasaaraha
Qaraxyadii ka dhacay Lebanon Khasaaraha oo sii kordhaya iyo dowladda oo dalbatay gurmad caalami ah was last modified: August 5th, 2020 by Admin
Ra’iisul wasaare Rooble oo magacaabay guddi farsamo oo ka shaqeeya qaban-qaabada shirka golaha wada tashiga Qaran